A na-egosi Pixel 4 na mgbasa ozi TV nwere mmegharị ahụ yana igwefoto gị | Androidsis
Mgbasa ozi TV maka Pixel 4 na-egosi igwefoto na njikwa ngosi
Al Pixel 4 enweghị otu ọnwa na oge ọ bụla anyị chọtara ozi ndị ọzọ na -egosi anyị atụmatụ ya kacha mma. Taa ọ gbara mgbasa ozi TV ebe enwere ike ịhụ ya na mmegharị ahụ na enyo na igwefoto nke a na -atụ anya ọtụtụ ihe na ya.
Un ekwentị nke gafere ọkwa na laghachi na imewe nke afọ gara aga na nke ahụ yiri ka ọ bụ ihe mgbe ochie. Ọbụna ụbọchị ahụ si n'ihu ya pụta ìhè, ọtụtụ ndị ekweghị n'ihi na ọ dị ka afọ ndị ọzọ.
Ihe na -achọ ịmata bụ na a nabatara ya dịka ọ dị na ọ nweghị ihe mere ... Google nke nwara ịre anyị ọkọlọtọ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 1.000, mana jiri mgbasa ozi TV na mmegharị aka ya na enyo na igwefoto, ebe ọ naghị eme ka ndị kwenye kwenye.
N'ezie, ha na -eji ahụmịhe ha na -ebupute ikpo okwu ndị ama ama iji gosi na ha agaghị eme ihe dị ka YouTube, Maapụ Google na ndị ọzọ. Ọ dị anyị nwute mana ọ na -ewe ọtụtụ ihe kwaga Samsung, Huawei na Apple; ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ka o sina dị, ha ga -etinye anụ niile dị na grill ka oghere oghere ahụ ebe enyo ha bụ ihe ngọpụ ka anyị daba n'agba ha ka Pixel 4. rie ya. ụfọdụ ace ha ga -eji aka ha kụziere anyị ọrụ ọhụrụ nke Pixel 4 dị na foto ahụ tụrụ anyị n'anya; dị nnọọ ka ọ mere na gcam ya afọ abụọ gara aga na nke ahụ bụ ihe ngọpụ ịzụrụ ya mgbe ihe ndị ọzọ fọdụrụ na -erubeghị.
Okwu okwu ya ọzọ dị na vidiyo a bụ ka i were "ekwentị emere n'ụdị Google" n'aka gị. Anyị na -ekwugharị, enwere ụfọdụ ụdị na -enye ya ike ha niile, yabụ anyị ga -ahụ ka Pixel 4 ọhụrụ si ada mgbe ọ bịarutere n'ihe na -erughị otu ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mgbasa ozi TV maka Pixel 4 na-egosi igwefoto na njikwa ngosi
Esi ewepu bọtịnụ ike nke Samsung Galaxy Note 10
Galaxy Tab Tab Pro: Mbadamba mbadamba nkume Samsung